Mashoko | Purogiramu yeGungano ya2017—“Usaneta!”
Mashoko Kune Vachapinda
SARUDZA MUTAURO Abbey Acholi Afrikaans Ahanta Aja Albanian Alur Amharic Amis Arabic Armenian Assamese Attié Aukan Aymara Azerbaijani Bambara Baoule Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Bété Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chopi Chuabo Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dusun Dutch Edo Esan Estonian Ewe Fante Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Garifuna Georgian German Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guianese Creole Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Huastec (San Luis Potosi) Huichol Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabuverdianu Kabyle Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mayo Mazahua Mazatec (Huautla) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCroatia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nahuatl (Veracruz) Navajo Ndau Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Otomi (State of Mexico) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yacouba Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Ixtlán) Zapotec (Villa Alta) Zulu
Purogiramu yeGungano ra2017
BASA REPABHETERI Vaparidzi vakabhabhatidzwa vane makore 35 zvichidzika uye vanofarira basa repaBheteri vanofanira kuronga kuti vapinde musangano wevanoda kushanda paBheteri uchaitwa musi weChishanu masikati. Nzvimbo ichaitirwa musangano uyu uye nguva yacho zvichaziviswa.
CHIKORO CHEVAZIVISI VEMASHOKO OUMAMBO Mapiyona ane makore ari pakati pe23 ne65 anoda kuwedzera ushumiri hwawo anokokwa kuti azopinda musangano wevanoda kupinda Chikoro Chevazivisi Vemashoko oUmambo musi weSvondo masikati. Nzvimbo ichaitirwa musangano uyu uye nguva yacho zvichaziviswa.
BASA ROKUZVIPIRA Kana muchida kuzvipira kubatsira pabasa rine chekuita negungano, tapota endai kuDhipatimendi reMashoko Nevazvipiri.
FIRST AID Tapota yeukai kuti NDEYEKURAPA ZVINODA KUKURUMIDZIRWA CHETE.
KUBHABHATIDZWA Nzvimbo yokugara yakachengeterwa vachabhabhatidzwa ichava munhandare pakatarisana nechikuva asi kana pakaita zvachinja muchaziviswa nguva ichiripo. Vanoda kubhabhatidzwa vanofanira kunge vagara munzvimbo yavakachengeterwa, hurukuro yekubhabhatidzwa isati yatanga musi weMugovera mangwanani. Mumwe nemumwe anofanira kuuya netauro nechipfeko chekubhabhatidzwa nacho chine mwero.
MARI YEZVIPO Pakashandiswa mari yakati wandei kuti pave neurongwa hwekuti pave nepekugara pakakwana, gudzanzwi, michina yekuonesa mavhidhiyo nezvimwe zvakawanda zvinoita kuti tinakidzwe nekupinda gungano uye tibatsirwe kuswedera pedyo naJehovha. Mari yezvipo yamunopa inobatsira kubhadhara zvinhu izvi uyewo kutsigira basa remunyika yese. Kuti zvikuitirei nyore, mabhokisi emari yezvipo akanyorwa zvakajeka anowanikwa panzvimbo yese yegungano. Mari yese yezvipo inoongwa chaizvo. Dare Rinotungamirira rinoda kukuongai nekupa kwamunoita muchitsigira zvinhu zvine chekuita neUmambo.
POKUGARA Tapota fungaiwo vamwe. Yeukai kuti munogona kuchengetera pokugara vaya vamungave muchifamba navo, vamabva navo kumba kana kuti vamuri kudzidza navo Bhaibheri. Tapota musaisa zvinhu panzvimbo dzamusiri kubatira vamwe.
VARINDIRI Varindiri varipo kuti vakubatsirei. Nyatsotevedzerai zvavanokuudzai panyaya yepokupaka motokari, kudzora vanhu, kuchengetera vamwe pokugara, uye pane zvimwewo.
ZVAKARASIKA NEZVAKAWANIKWA Zvinhu zvose zvinenge zvawanikwa zvinofanira kuendeswa kuDhipatimendi Rezvakarasika Nezvakawanikwa. Kana paine chamunenge marasa, endai kudhipatimendi iri munoona kana kuine zvinhu zvenyu. Vana vanenge vachingodzungaira vasina vabereki uye vanenge varasika vanofanira kuendeswa kudhipatimendi iri. Zvisinei, dhipatimendi iri harifaniri kuonekwa senzvimbo yokuchengetera vana. Tapota chengetai vana venyu, uye rambai muinavo.
Rakarongwa neDare Rinotungamirira reZvapupu zvaJehovha
Chii Chinonzi Bheteri?
Bheteri inzvimbo yakasiyana nedzimwe ine chinangwa chinokosha zvikuru. Dzidza zvakawanda nezvevaya vanoshanda ipapo.
Zvikoro Zvipi Zvakaitirwa Mapiyona?
Idzidzo ipi inokosha inowaniswa vaya vanozvipira kupa nguva yavo yakazara kubasa rokuparidza Umambo?
Zvapupu zvaJehovha Zvinowana Kupi Mari Yokushandiswa Pabasa Razvo Romunyika Yose?
Panyaya yokutsigira nemari, chii chinoita kuti sangano redu risiyane nezvimwe zvitendero?
Zviyeuchidzo Zvegungano Remunharaunda